यस बर्ष विवाह गर्ने सोचमा यी बलिउड सेलिब्रेटी ! - Seto Page Seto Page
यस बर्ष विवाह गर्ने सोचमा यी बलिउड सेलिब्रेटी !
कोरोनाका कारण सन् २०२० सबैको लागि सकसपूर्ण रह्यो । आफूले योजना बनाए अनुसार कसैले पनि काम गर्न सकेनन् । धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरुले २०२० मा विवाह गर्ने योजना बुनेका थिए । तर कोरोनाका कारण योजना सफल हुन सकेन ।
अब २०२० मा अधुरै रहेको विवाहलाई धेरै बलिउड सेलिब्रेटीले २०२१ मा पुरा गर्ने भएका छन् । पछिल्लो समयमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका जोडी रणवीर कपुर र आलिया भट्टले २०२० मा बिहे गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । तर कोरोनाका कारण हुन सकेन । उनीहरुले २०२१ मा आफ्नो विवाह हुने सम्भावना प्रवल रहेको बताएका छन् ।
यस्तै अर्का जोडी हुन् अर्जुन कपुर र मलाइका अरोरा । यी दुइ विगत २ बर्षदेखि प्रेममा छन् । यी दुईले पनि सन् २०२० मा नै विवाह गर्ने बताएका थिए । तर अब उनीहरुले २०२१ मा बिहे गर्ने सोच रहेको बताएका छन् । बिहे हुन्छ वा हुदैँन त्यसको टुंगो भने छैन ।
यी लगायत सुष्मिता सेन र कता कता टाइगरले पनि प्रेमिका दिशासँग बिहे गर्ने खबर आइरहेको छ तर टाइगर र दिशा दुवैले यसबारे कुनैपनि जानकारी भने दिएका छैनन् ।
विरेन्द्र नौभाग्य को ‘तिम्रो मनमा’
काठमाडौं । नयाँ वर्षको पावन अवसरमा प्रवासमा रहेर पनी नेपाली सुगम संगीतको निर्देशन गर्दै आएका
यी बलिउड स्टार, जो साइन गरेको चलचित्रबाट रातारात निकालिए…
बलिउड इन्डष्ट्रि ठूलो छ । इन्डष्ट्रि ठूलो भएका कारण इन्डष्ट्रिमा काम गर्ने कलाकारहरु पनि धेरै
डेड दर्जन ख्याती प्राप्त कलाकारहरुको अभिनयमा “सुर्ती जर्दाले” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
निरन्तर नेपालि लोम संगीतको सम्बर्धन तथा प्रबर्धनमा जुटिरहेका धादिङ्गका युवा सर्जक प्रदिप अधिकारीले पुनः अर्को
‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिवल–२०२१’ (नाफ २०२१) यही १० बैशाखदेखि १२ बैशाखसम्म आयोजना हुने भएको छ